Imephu ye-AutoCAD 3D iyahambelana neLinux-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD Imephu ye3D isekela iLuxu
I-AutoCAD Imephu ye3D isekela iLuxu
Nangona i-AutoDesk ikuyekile ukuhambelana kwayo neLinux okwethutyana, kule minyaka idlulileyo yenze imizamo yokubuya, kungoko nje ibhengeze ukungahambelani kwayo kolu khululo.
INkqubo eNtsha yoBonelelo lweSicelo Citrix XenApp Ivumela ngokulula imephu yesoftware ye-AutoCAD i-3D abathengi ukuba benze, bathumele kwaye balawule isisombululo sesoftware ye-Geospatial kwisimo seCitrix.
Iinkqubo ze-Autodek kunye neCitrix System, Inc. ziye zadibana ngenjongo yokubonelela abathengi babo ngokusebenza ngakumbi kunye nokuguquguquka kusetyenziso lwe-Autodek geospatial application. Ukuhanjiswa kwemephu ye-AutoCAD ® Imephu ye-3D ngeCitrix XenApp ™ ivumela abathengi ukuba bonyuse ukusebenza kwesicelo kunye nokunciphisa iindleko zokuphunyezwa.
Kwiplatifti yeLinux, isisombululo seCitrix Ready siyakwazi ukulawula iimveliso ezihambelana nesicelo seCitrix, ngaloo ndlela yenze lula inkqubo yokukhetha isoftware yabasebenzisi beCitrix kwaye ibavumele ukuba bafikelele kwimephu ye-AutoCAD 3D. Abasebenzisi beenkcukacha zeMephu ye-AutoCAD 3D 2009 banokuhlala ngoku kwiiseva zeCitrix, bafumane ukonyuka kwezokhuseleko, ukuncitshiswa kweendleko ze-Hardware kunye nokunyuka kwembuyekezo kutyalo mali ukuya kuthi ga kwiipesenti ze30.
Ukulungiswa nokulawulwa kwezicelo kwiziko ledatha ngoku zibekwe kumbono wesicelo seCritrix, esinciphisa iindleko zolawulo lwe-IT, sandisa ukhuseleko lwedatha kwaye siphucula ukuthotyelwa kwemigaqo. Ukongeza, i-Citrix XenApp isasaza ezona zicelo zinamandla zeWindows® kulo naluphi na uhlobo lwesixhobo okanye iqonga lokusebenza ngaphandle kokuncama ukusebenza okanye ukusebenza.
Abaqulunqi, iinjineli kunye nabaphathi abasebenza kunxibelelwano ngonxibelelwano, izixhobo zendalo, ulawulo lukawonke-wonke kunye namacandelo amandla axhomekeka kwimephu ye-AutoCAD 3D ukudibanisa idatha kwiisistimu yoyilo lwekhompyuter ezincedisayo-I-CAD- kunye neenkqubo zolwazi lwendawo-GIS- ngexesha Uyilo kunye nokugcinwa kweprojekthi. Imibutho idla ngokufaka isoftware ekuhlaleni kwiilaptops kunye neendawo zokusebenzela ezinamandla aphezulu ukuze abasebenzisi besebe bayisebenzise. Nangona kunjalo, le ndlela yemveli yokwenziwa kwendabuko inokubambezeleka iinethiwekhi ze-WAN ngexesha lokunxibelelana nezixhobo eziziisekondari (ezingemva kokuphela), kuvelise iingxaki zokhuseleko kwaye zithwale kakhulu abasebenzi be-IT, abanokuthi baye kwii-ofisi ezikude ukuya kubaxhasa.
Ukuhanjiswa kwesicelo okwenzelwe ukwandisa ixabiso leMephu ye-AutoCAD ye-3D Citrix XenApp, ukunceda abathengi ukuba bandise utyalomali lwabo kwisoftware ye-AutoCAD yemephu 3D ngeendlela ezahlukeneyo njengokuphucula ukusebenza kwabo kwi-WAN, ukubonelela ngokhuseleko lwesicelo esomeleleyo okanye ukhuseleko olukhulu lwedatha kunye nempahla yengqondo, kunye nokubanokwenzeka kokudibanisa iiseva kunye nolawulo.
Ngolwazi oluthe kratya ungandwendwela:
I-AutoCAD Imephu AutoDesk
I-software ye-GIS yamahhala kwi-OSWC 2008
Geofumed, ubomi bam bucala